Ronaldinho oo ka fiirsanaya Saddex Dalab oo soo gaartay ka hor inta uusan ka fariisan Ciyaaraha – Gool FM
Ronaldinho oo ka fiirsanaya Saddex Dalab oo soo gaartay ka hor inta uusan ka fariisan Ciyaaraha
Haaruun October 23, 2016
(Rio de Janeiro), 23 Okt 2016 –Laacibkii hore ee Brazil Ronaldinho ayaa haatan ka fiirsanaya sidii uu ka yeeli lahaa saddex Dalab oo ay soo gaarsiiyeen kooxo doonaya in ay la wareegaan ka hor inta uusan guud ahaan ka fariisan Cayaaraha Kubadda Cagta, sida uu shegay Wakiilkiisa ahna walaalkiis Roberto de Assis Moreira.
Xidiggii hore ee labada jeer ku guuleystay Abaalmarinta laacibkii ugu fiicnaa Adduunka ee FIFA World Player of The year (2004 iyo 2005) ayaa ku dhowaaday inuu ka fariisto Kubadda Cagta markii Bishii September 2015 ay isku afgarteen isaga iyo kooxdiisii hore ee Fluminense inuu naadigaasi ka tago isagoo u ciyaarayay wax ka yar saddex bilood oo qura.
Haatan ciyaartoygii hore ee Barcelona waa 36 jir, waa koox la’aan, kamana daalo inuu ciyaaro kubadda cagta, isagoo kulankii ugu dambeeyay ee uu saftayna uu ahaa ciyaartii samafalka ahayd ee 12 bishan Oktoobar ka dhacday Talyaaniga.
“Waxaan haysannaa saddex codsi waana ka fikireynaa” ayuu Ronaldinho walaalkii Roberto u sheegay ‘O Jogo’.
“Haatan wuu faraxsan yahay marka uu ka qayb qaadanayo ciyaaraha isla markaana u safrayo Caalamka” ayuu sii raaciyay.
#AWANInews Brazil great Ronaldinho considering three contracts https://t.co/CZKw10QxCC pic.twitter.com/eASLbenQRn
— Astro AWANI (@501Awani) October 23, 2016
Daawo Taageere Chelsea ah oo Hees u sameeyay Jose Mourinho ka hor soo laabashadiisa Stamford Bridge
Ogoow hal caqabad oo hor istaagi karta in Thiago Silva uu ku biiro Juventus